News | सारा अली खान
News | Tag: सारा अली खान
साराको प्रेम सम्बन्धः कहिले वीर पहरिया, कहिले सुशान्त कहिले कार्तिक आर्यन
एजेन्सी । सैफ अली खान र अमृता सिंहकी छोरी सारा अली खान अहिले बलिउडकी एक चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनलाई अहिले बलिउड क्वीन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ।
को हुन् यी मास्क लगाउने अभिनेत्री ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसले विश्वमै त्रास फैलाइरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यस भाइरसले संक्रमण फैलाएको छ ।
सारालाई बाइकमा राखेर आफ्नै फिल्म देखाउन लगे कार्तिकले
एजेन्सी । अभिनेत्री सारा अली खान र कार्तिक आर्यनको फिल्म ‘लव आज कल’ सिनेमा घरहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ । फिल्म निर्माण टिमले १३ फेब्रुअरी अर्थात फिल्म रिलिज हुनुभन्दा एक दिन पहिले स्टारकास्टका लागि विशेष स्क्रिनिङको आयोजना गरेका थिए ।
योगा क्लास बाहिर मलाइकाको यस्तो लुक, सेतो ड्रेसमा साराले देखाइन् जादू
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री आफ्नो फिटनेसलाई एकदमै ख्याल राख्दछन् । अभिनेत्री दिनमा अरु काम बिर्सन सक्छन् तर आफ्नो लागि समय निकाल्न बिर्सँदैनन् ।
बलिउड क्वीन साराको पहिरनको चर्चा चलेपछि...
एजेन्सी । बलिउड उद्योगकी सुन्दर तथा स्टाइलिश अभिनेत्री सारा अली खान हालसालै मुम्बई पुलिसको वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘उमंग २०२०’मा सहभागी भएकी थिइन् ।
‘भ्यालेनटाइन–डे’मा के गर्दैछन् सारा र कार्तिक ?
काठमाडौं । कार्तिक आर्यन र सारा अली खानको फिल्म ‘लभ आजकल’को ट्रेलर रिलिज भइसकेको छ । फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्देशक इम्तियाज अली र निर्माता दिनेश विजान पनि उपस्थित थिए । ‘लभ आजकल’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा कार्तिक र साराले आफ्नो भ्यालेन्टाइन–डेको योजनाको चर्चा पनि गरे ।
जिमबाहिर यस्तो अवस्थामा भेटिए बलिउड क्वीनहरु
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्रीहरु फिट रहनका लागि वर्कआउटमा सहभागी भइरहन्छन् । आफ्नो सुन्दरताको जादु कायम राख्न उनीहरु जिम पुगेर वर्कआउट गर्दछन् । कुनै न कुनै समय ती बलिउड क्वीनहरु मिडियामा छाउँछन् भने सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको तस्बिर भाइरल हुन्छ ।
डान्स क्लास बाहिर भेटिए सारा–कार्तिक जोडी
एजेन्सी । अभिनेता कार्तिक आर्यन र सारा अली खान अहिले फिल्म ‘आज कल’ मा व्यस्त छन् । आजभोली यी जोडी थुप्रै ठाउँमा सँगै भेटिन्छन् । हालसालै यी जोडीलाई डान्स रिहर्सल पछि फर्किँदै गर्दा भेटिएका छन् । उक्त तस्बिरहरु भाइरल भएका छन् ।
अबेर रात मुम्बईको सडकमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन् सारा अली खान
एजेन्सी । पछिल्लो समय बलिउडमा सारा अली खानको सुन्दरता र लुकको सर्वाधिक चर्चा चल्ने गर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय देखिने सारा मुम्बईको शहरमा अबेर रातमा भेटिएकी छन् । उक्त तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएका छन् ।
विकिनी लुकमा अभिनेत्री साराको विकेन्ड
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सारा अली खान अहिलेको समयमा माल्दिभ्समा छु्ट्टी मनाइरहेकी छन् । भ्याकेशनको क्रममा साराले एक्जाँटिक लोकेशनमा केही तस्वीरहरु खिचाएकी छन्, जुन सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेका छन् ।